James Swan;”Waa Niyadjab ka Maqnaanshaha Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland Shirka Dhuusamareeb – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
James Swan;”Waa Niyadjab ka Maqnaanshaha Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland Shirka Dhuusamareeb
Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan dalka Soomaaliya James Swan oo qudbad uu ka jeediyay Golaha Ammaanka waxa uu ugaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin Doorashooyinka Soomaaliya,Xiriirka u dhexeeya Dowlada Federalka iyo Dowlad Goboleedyada,Xaalada Ammaanka iyo Horumarka
James Swan ayaa u mahad celiyay madaxda dowlada federalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb,balse waxa uu James Swan walaac ka muujiyay maqnaanshaha shirka ee Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland.
“Waa niyad jab inaysan ka soo qeybgalin shirka dhuusamareeb inkastoo codsiyo ay u direen hogaamiyaasha siyaasada iyo beesha caalamka.”ayuu yiri James Swan.
Swan ayaa qudbadiisa ku soo hadal qaaday khudbadii ay ka jeedisay guddoomiyaha doorashooyinka madaxabanaan golaha shacabka iyadoo tilmaantay in aysan dhici karib doorasho qof iyo cod ah kahor bisha March 2021.
“Dastuurka Soomaaliya waxa uu qorayaa in doorashada baarlamaanka ay dhacayso afartii sanaba mar.”ayuu xusay James Swan.
James Swan ayaa qudbadiisa waxa uu ugaga hadlay horumar laga sameeyay xiriirka dowlada dhexe iyo dowlad goboleedyada.
Previous Odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed oo uga digay madaxda dowladda inay dalka geliyaan fowdo.
Next Puntland oo lagu eedeeyey qiimaha warqadda COVID-19 oo ay Sare u qaaday